स्याङ्जाका पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र, जहाँ मन लोभ्याउने दृश्य भेटिन्छ - स्याङ्जाका पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र, जहाँ मन लोभ्याउने दृश्य भेटिन्छ
२०७५, ११ चैत्र, 09:56:36 AM
स्याङ्जा । गण्डकी प्रदेशको केन्द्रसँग सिमाना जोडिएको पर्यटकीय तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट प्रचुर सम्भावना बोकेको एक जिल्ला हो, स्याङ्जा । पोखराबाट सवारी सधनमा करिब १ घण्टा घुम्तीबाटो ३५ किलोमिटरको यात्रा पश्चात रमणीय र पर्यटकीय स्याङ्जा जिल्ला पुग्न सकिन्छ ।
स्याङ्जा जिल्लामा रहेका विविध पर्यटकीय स्थान र धार्मिक स्थलहरुले स्याङजा पुग्ने जो कोही आन्तरिक तथा बवाह्य पर्यटकहरुको मन लोभ्याउँछ । हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालका एकसय पर्यटकीय गन्तव्यमा स्याङ्जाका चार गन्तव्यलाई पर्यटकीय सूचीमा सुचीकृत गरिएको छ ।
जसमध्ये २ पर्यटकीय गन्तब्यलाई नयाँ गन्तब्यका रुपमा समाबेश गरिएको छ भने दुईलाई प्रबद्र्धनात्मक गन्तब्यको सूचिमा समावेश गरिएको हो । स्याङ्जाका सतौं चण्डीथान र आलमदेवी नयाँ गन्तव्य एवं सिरुबारी र स्वरेक मैदानलाई प्रवद्र्धनात्मकतर्फ समावेश गरिएको छ । स्याङ्जाका घुम्न लायकका पर्यटकीय गन्तब्य र धार्मिक हिसाबले चर्चित केही स्थलहरुको बारेमा चर्चा गरेका छौं ।
१. दरौं सिरुवारी
स्याङ्जाको उत्तरी क्षेत्र आँधधीखोला गाउँपालिकामा पर्ने स्थापित ग्रामीण पर्यटनको अवधारणामा आधारित दक्षिण एसियाकै पहिलो होमस्टे (घरबास) दरौं सिरुवारी । पोखराबाट करिब ६५ कि.मी टाढा पर्ने सिरुवारी १ हजार ५ सय मिटरको उचाईमा छ, गुरुङ बस्तीका रूपमा प्रख्यात रहेको छ ।
सिरुबारीमा पुग्न सिद्धार्थ राजमार्गको नागडाँडा, सेतीखोला, बाडखोला र हेलु गरी चार ठाउ“को बाटो हुँदै जान सकिन्छ । पर्यटकहरुलाई न्यानो स्वागत, स्थानीय उत्पादनमा आधारित अर्गानीक स्वच्छ खानपिनले सिरुवारी पुग्ने जो कोहिलाई आनन्दीत महसुस गराउँछ ।
सिरुबारीबाट धौलागिरी र माछापुच्छे हिमश्रंखलाको सहजै अवलोकन गर्न सकिन्छ । सिरुबारीबाट सूर्योदयको अवलोकन गर्ने स्टेशनका रुपमा चित्रित गरिन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मा सिरुवारीलाई होमस्टे घोषणा गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट सिद्धार्थ राजमार्गको जाने बाटोमा २८ किलोमिटर पार गरेपछि भालुपहाड पुगिन्छ । मुख्य हाईवेमा नै घुम्ती र चट्टानको पहरो भालुपहाडले सबै यात्रुहरुलाई आनन्द दिलाउने गर्दछ ।
भालुपहाडको बाटो भएर यात्रा गर्ने जो कोहि पनि एक क्लिक फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न लालयित हुन्छन् । अझ बेलाबखत दृश्य कैदसहित गरिने म्यूजिक भिडियो र चलचित्रको सुटिङले यस स्थानलाई झनै सबैसामु लोकप्रिय बनाईदिएको छ ।
यस स्थानमा विद्यालयबाट वा विभिन्न संस्थाबाट बनभोजका लागि पनि पुग्ने गर्दछन् । पुतलीबजार र फेदीखोला गाउँपालिमा पर्ने यस स्थानलाई उक्त पालिकाले पर्यटकीय केन्द्र बनाउने गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको छ, यदि उक्त गुरुयोजनाले मूर्तरुप लिए आगामी केहि वर्षमा भालुपहाडलाई स्याङ्जाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा लिन सकिन्छ ।
३. स्वरेक मैदान
स्वरेक मैदान स्याङ्जा जिल्लाको अर्को प्रमुख पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान हो । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका ५ मा पर्ने स्वरेक मैदान पर्यटकीय रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । हालसालै स्वरेकमा पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय खुल्ला प्याराग्लाईडिङ प्रतियोगिता २०७५, राष्ट्रिय हवाई खेलाडी छनौट प्रतियोगिता २०७४ सम्पन्न भईसकेकाले यस स्थानको नाम नेपालमा मात्र नभई विश्वमै प्रख्यात बन्दै गएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत भीरकोट नगरपालिका १ बयरघारीबाट ७ किलोमिटर र वालिङ नगरपालिकाको वालिङ बजारदेखि १२ किलोमिटरको कच्ची सडक हँँदै यस स्थलमा पुग्न सकिन्छ । नेपालकै पहिलो प्यारग्लाईडिङ पाईल सानुबाबु सुनुवारले स्वरेकमा दक्षिण एशियाकै पहिलो प्याराग्लाइडिङ स्कूल स्थापना गरेका छन् ।
४. कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र सेतीवेणी
कालीगण्डकी जलविद्युत ‘ए’ परियोजना पोखराबाट करिब एक सय किलोमिटर पश्चिममा रहेको छ । कालीगण्डकी जल विद्युत परियोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो १४४ मेगावाट क्षमताको जलप्रवाह परियोजना हो ।
कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ५, ७ र गल्याङ नगरपालिकाको वडा नं २ सम्म फैलिएको छ । कालीगण्डकीमा जल यातायात (स्टिमर) सञ्चालन भएपछि आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
पर्वत, गुल्मी र स्याङ्जाको संगमस्थलमा पर्ने सेतीवेणीमा विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिलाको अध्ययन अवलोकन गर्नका साथै स्टिमरमा जलयात्रा गर्नका लागि विभिन्न जिल्लासहित विदेशबाट समेत पर्यटक आउने गरेका छन् । बर्षात्को समयमा कालीगण्डकीको बहाव बढ्ने भएकाले जेठको अन्त्यदेखि असोज १५ सम्म चाहि यो बन्द रहन्छ ।
विश्वकै ठूलो र कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने भएकाले पछिल्लो समय भारतीय पर्यटक तथा तीर्थयात्री पनि शालिग्राम शिलाको दर्शन गर्न आउने गरेका छन् । शिलामा एकादशी, माघेसङ्क्रान्ति, बालाचतुर्दशी, शिवरात्रि लगायतका पर्वमा विशेष पूजाअर्चना गरिन्छ ।
स्याङ्जा जिल्ला भीरकोट नगरपालिका ४ स्थित छाङ्गछाङ्गदी रहेको छ । स्याङ्जा सदरमुकामबाट करिब १८ किलोमिटर दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमको छेउमै छाङ्गछाङ्गदी पर्दछ ।
स्वस्थानी ब्रतकथामा आधारित सतीदेवीको अन्तिम अङ्ग पतन भएको स्थलले यो स्थान चर्चित छ । छायाँक्षेत्रको नामले समेत परिचित यस पवित्र स्थलमा भीरमा बनेको मन्दिर र सितल बातावरणसँगै गाईको मुखजस्तै देखिने धाराबाट आउने पानी आकर्षणको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ । सिद्धार्थ राजमार्गमको ओहोरदोहोर गर्ने जो कोहि पनि यस स्थानको दर्शन गर्ने गर्दछन् ।
स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लाको सिमानामा रहेको कालिगण्डकी नदी किनारामा रहेको प्रशिद्ध धार्मिक स्थल हो रामनदीधाम । यहाँ वैशाखे सक्रान्ति, कात्तिके ठूली एकादशी सहित बिभिन्न समयमा मेला लाग्ने गर्दछ । यो धार्मीक स्थल सदरमुकामबाट ५२ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ ।
स्याङ्जा जिल्ला आसपासका व्यक्तिहरुको निधन पश्चात रामनदीधाम दाहसंस्कारका लागि पनि लैजाने गर्दछन् । राम्दीघाटमा सुविधासम्पन्न वृद्धाआश्रम पनि रहेको छ, जहाँ करिब एक सय बृद्धवृद्धाहरु बसोबास गरेका छन् । रामनदीधाम नजिकै शिद्ध गुफा समेत रहेको छ । उक्त गुफामा लगेर परम्परागत समयमा व्रतबन्ध गराउनुका साथै घरमा गाई, भैसी ब्याउँदा दुध चढाएमा राम्रो हुने विश्वास गरिन्छ ।
७. सतौं चण्डीथान र चण्डीकालीका
चण्डीथान स्याङ्जा जिल्लाको अर्को एक पर्यटकीय तथा धार्मिक दृष्टिले सम्भावना बोकेको स्थान हो । पुतलीवजार नगरपालिका १४ संतौमा यो मन्दिर पर्दछ । स्याङ्जाबाट करीब डेढ घण्टा पैदल हिंडेर वा २० मिनेटको सवारी साधनको यात्रापछि पुग्न सकिन्छ ।
विभिन्न तिथिहरुमा श्रद्धालु भक्तजनहरुको घुईचो लाग्ने गर्दछ । रमणिय ठाउँमा रहेको यस मन्दिरबाट स्याङ्जा लगाएत विभिन्न स्थान र मनोरम हिमाली दृष्यहरु पनि देख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको एकसय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा सूचीकृत भएको स्याङ्जाको सतौं चण्डीथान पनि एक हो । यो स्थानलाई बाइसे चौबीसे राज्यका पालामा पश्चिमका चौबीसे राज्यहरुमध्येकै सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यका रुपमा समेत लिईने गरिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति केयरसिंह बस्नेत मारिएको स्थल यही भएको किम्वदन्ती समेत रहेको छ । यस स्थलमा अहिले दरबारको भग्नावशेष मात्रै बाँकी रहेको छ । सतौंकोटे राजाको इष्टदेवीका रुपमा पुजिने यस स्थानमा रहेको चण्डी र कालिका गरी दुई वटा मन्दिरहरु रहेका छन् जुन मन्दिर झण्डै छ सय वर्ष पुरानो रहेको मानिन्छ ।
८. सुन्तलाबारी होमस्टे र क्यानोनिङ
स्याङ्जा जिल्लाको अर्को पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा लोकप्रिय स्थान हो वालिङ् नगरपालिका ४ एलादीस्थित सुन्तलाबारी घरबास (होमस्टे) र क्यानोनिङ् ।
स्याङ्जा सदरमुकामबाट करिब २४ किलोमिटर दक्षिणतर्फ सिद्धार्थ राजमार्ग रामबाच्छा पुगेपछि त्यसवाट पूर्वतर्फ ७ किलोमिटर ग्रामीण सडकको यात्रापछि सुन्तलाबारी होमस्टे पुग्न सकिन्छ । होमस्टे स्थलदेखि करिब १० मिनेटको दुरीमा रहेको खाल्टेमा २ वटा क्यानोनिङ स्थल निर्माण गरिएको छ ।
वसन्ती रह र खाल्टे रह क्रमश ५५ र ३५ मीटर उचाइमा रहेका छन् । जहाँ पर्यटकहरु होमस्टेको मज्जासँगै क्यानोनिङ्मा रमाउँछन् । पर्यटकको बसाईलाई लम्ब्याउनका साथै साहसिक पर्यटनको अनुभव दिलाउने उद्देश्यले क्यानोनिङ् सञ्चालनमा ल्याइएपछि यहाँ पर्यटकहरु अझ बढेका छन् ।
स्याङ्जा जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका अन्तर्गत साविकको आलमदेबी गाविसमा पर्ने ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र हो, आलमदेवी मन्दिर । स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतलीबजार बाट ७७ किलो मिटर दक्षिण पश्चिममा यस मन्दिर तथा धार्मिक स्थललाई स्याङ्जाको प्रशिद्ध मन्दिरका रुपमा लिइन्छ ।
धार्मिक रुपमा प्रख्यात आलमदेवी मन्दिरलाई शाह वंशका कुलदेवीका रुपमा लिइन्छ । यस मन्दिरलाई स्थानीय आफैले निर्माण गरेका हुन् । यस मन्दिरमा शिवरात्री, रामनवमी र अन्य चाडपर्वमा स्याङ्जा सहित छिमेकी जिल्लाबाट भक्तजनहरु आउने गर्दछन् । यस मन्दिरमा मगर जातीको (पुजारी) पुजा गर्ने प्रचलन रहेको
स्याङ्जा जिल्लाको उच्च मध्य पहाडी भुभागमा अवस्थित पर्यटकीय ठाउँ हो, नुवाकोट र कालाभैरब मन्दिर छ । स्याङ्जाको पुरानो सदरमुकाम समेत रहेको नुवाकोट समुन्द्र सतहबाट १ हजार ९ सय मिटर को उचाइमा रहेको छ ।
चौबिसे राज्य मध्येको एक शक्तिशाली राज्य नुवाकोट प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण छ । यहाँबाट माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण, धवलागिरी, मनास्लु जस्ता हिमालको सुन्दर अवलोकन गर्न पाइन्छ । पर्यटकीयसँगै यो एक धार्मिक स्थल पनि हो । जहाँ कालाभैरब मन्दिरलाई देवदेवताहरुले पुजाको बिसर्जन गर्ने मन्दिरका रुपमा बुझिने परम्परागत विश्वास छ ।
यहाँ दशैको नवमी, चैते दशै बेलामा भाकल अनी पूजाका लागि आयका भक्तजनहरुको बिशेष घुईचो लाग्ने गर्दछ । यसको टुप्पोमा भैरबनाथ मन्दिर पनि रहेको छ । यस स्थानबाट स्याङ्जाको नयाँ सदरमुकाम र स्याङ्जाका बिभिन्न स्थानहरुको अवलोकन गर्न सकिन्छ । पोखराबाट नजिकै पर्ने यस स्थानलाई पनि पर्यटकीय तथा धार्मिक दुबै हिसावले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
११. श्रवण कुमार समाधी क्षेत्र र अन्धाअन्धी दह
स्याङ्जा जिल्लाको साविकको वाङ्सिङ्ग गाविसको वडा नं ८ को घ्याङ्गसिरीमा श्रवणकुमार समाधि क्षेत्र रहेको छ । यस स्थानमा पानी भर्दा वाण लागि श्रवण कुमारको मृत्यु भएकाले यस ठाउँलाई श्रवण कुमार समाधी क्षेत्रको नामले चिनिएको किम्वदन्ती पाइन्छ । यहाँ श्रवण कुमारले पानी भर्दा घोप्टो परेको मूर्ति, पानीको रङ्ग रातो र दशरथले वाण हान्न लुकेर बसेको पहरा समेत छ । उक्त स्थानमा हाल बाला चतुर्दशीमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा मन्दिर समेत निर्माण गरिएको छ ।
स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला गाउँपलिका २, चिलाउनेबासमा अन्धानअन्धी दह सदरमुकामबाट २८ किलो मीटर उत्तर पश्चिममा पर्छ । यसै दहलाई स्याङ्जाको प्रसिद्ध नदी आँधीखोलाको मुहान मानिन्छ । परापुर्व कालमा अयोध्याका राजा दशरथका भान्जा श्रवणकुमार अफ्ना माता र पिताहरु दुईवटै आँखा नदेख्ने थिए । उनीहरु एउटा छोरा श्रवणकुमार को साहरामा नै बाँचिरहेका थिए ।
त्यीनै श्रवणकुमारले नै उनीहरुलाई बोकेर तिर्थब्रत तथा धार्मिक स्थलहरु घुमाउने गर्दथे । घुम्ने क्रममा एक दिन उनीहरु एउटा ओढारमा बास बस्न पुगेका थिए, हाल त्यो ठाउँ आन्धा–अन्धी दहको ठीक माथि छ जहाँका पत्थरहरुमा विभिन्न आकृतीहरु, छाप कोरिएको भटिन्छ ।
त्यसैगरी भीरकोट नगरपालिकाको १ मा अवस्थित भीरकोट दरबार परम्परागत कालमा भीरकोटे राजाको दरबारको नामबाट चर्चित छ । यस्तै यहि नगरपालिकाको वडा नं ७ प्रख्यात खिलुङदेउराली मन्दिर रहेको छ । यस मन्दिरमा वडा दशैं, चैते दशैं र अन्य बिभिन्न समयमा सयौं खसी, बोकाको बलि दिईन्छ । मेलाका समयमा यहाँ हजारौं भक्तजनहरुको घुईचो लाग्ने गर्दछ ।
त्यस्तै चापाकोट नगरपालिका ६ मा पर्ने राधा दामोदर आश्रम तथा मन्दिर २०१३ सालमा भगवत शरण महाराजले निर्माण गरेका हुन्छ । उक्त मन्दिर र मन्दिरसँगै बृद्धा आश्रम रहेको छ । चापाकोट नगरपालिका खोरियाघाट, सेखाममा रहेको राममन्दिर, पुरकोट पर्यटकका आक्रर्षणका केन्द्र छन् ।
स्याङ्जा कास्की र पर्वत जिल्लाको सीमामा एक पर्यटकीय स्थानको रूपमा पंचासेडांडा चर्चित रहेको छ । समुद्र सतहबाट २ हजार ५ सय १२ मिटरको उचाईमा रहेको जिल्लाको अग्लो स्थान र बालाचतुर्दशीको दिन मेला लाग्ने स्थान सदरमुकामबाट ३० किलो मीटर उत्तर पश्चिममा पर्छ ।
वालिङ नगरपालिका ७ मा पर्ने गहौंसुर कालिका मन्दिरमा विशेषत कालिका देवीको पुजा गर्ने गरिन्छ । यस मन्दिरमा पुजाआजा गर्ने विभिन्न ठाउ“बाट भक्तजनहरु आउने गर्दछन् । वालिङ नगर क्षेत्रमा गह्रौसुर, बाहुनथान, सिर्सेकोट होमस्टे, पहले लगाएतका स्थानमा लामो सयमदेखि होमस्टे संचालन हुंदै आएका छन् ।
युवतीको हत्यारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद र जरिवानाको फैसला
कालीगण्डकीमा पौडी खेल्ने क्रममा युवक बेपत्ता